Naya Bikalpa | कोरोना भाइरसले भयाभह स्थिति ल्याएको हुँदा सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न लागि पर्नुपर्दछ - Naya Bikalpa कोरोना भाइरसले भयाभह स्थिति ल्याएको हुँदा सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न लागि पर्नुपर्दछ - Naya Bikalpa
प्रकाशित मिती: २०७८ बैशाख १३, १३: १४: ३०
दिनानुदिन कोभिड–१९ महामारी बढ्दै गइरहेको छ । विज्ञहरुको सुझाव अनुसार सरकारले तयारी गर्न नसक्दा अकालमा नेपालीहरुको ज्यान जान थालेको छ । सीमा क्षेत्रहरुमा खुलमखुल्ला भएका कारण पनि अनियन्त्रित रुपमा महामारीको रुप बढीरहेको छ ।
पर्याप्त मात्रामा अस्पतालहरुमा आईसियु नभएका कारण भयाभह हुने देखिन्छ । सरकारले विभिन्न शिर्षकमा पैसा अनियन्त्रित रुपमा खर्च गरी रहेको छ, तर मानिसको जीवनसँग गाँसीएको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा खर्च गर्न सरकार अघि सरेको छैन ।
आन्तरिक दलदलमा नराम्ररी जाक्की रहेको कारण सरकारले नेपाली दाजुभाईलाई स्वास्थ्य सेवा दिन प्रतिदिन चुक्दै गएको छ । यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रीत भएर हाम्रा संवाददाताले शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालका निर्देश डा.सागर कुमार राजभण्डारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पदीत अंशः
लकडाउन गर्नुपर्ने आवश्यक किन र के–का लागि ?
लकडाउन भनेको पहिलेको जस्तो लामो लकडाउन होइन । केवल २ हप्तादेखि ३ हप्ता सम्मको लागि मात्र गर्ने हो । यो लकडाउन देशैभरी गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन ।
जहाँ उच्च जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरु छ, त्यस ठाउँहरुमा मात्र गर्ने ? जस्तैः काठमाडौं उपत्यकाका शहरहरु, तराइका ठूलाठूला शहरहरु जहाँ उच्च जोखिम छ, त्यस ठाउँमा गर्ने यो लकडाउन गर्नुको उद्देश्य के हो भन्दा मानिसहरुको अनियन्त्रित भिडभाड, जमघटलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि भएपनि लकडाउन गर्नुपर्छ । दुई तीन हप्ताको बिचमा यो गर्दाखेरी बढि राखेको संक्रमणको दर केही लेभलसम्म तल जान्छ । त्यसपछि लकडाउन खोल्ने हो ।
गम्भीर प्रकृतिको संक्रमणको संख्या प्रत्येक दिन बढिरहँदा आइसियु भेन्टिलेटरमा बिरामी राख्नको लागि मुस्किल भइरहँदा यस्तो अवस्थामा लकडाउन गर्दाखेरी संक्रमणको संख्या घट्न सक्छ त ?
अबको आवश्यकता नै लकडाउन हो जस्तो लाग्छ । यतिका धेरै सिरियस केस आइराखेको छ । अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्न एकदमै अप्ठ्यारो भइराखेको छ । कोभिड अस्पताल मात्र नभइ अन्य अस्पतालमा पनि बेडहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।
यसको साथसाथै अस्पतालको क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन पनि गर्ने, अनावश्यक मुभमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि लकडाउन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चिकित्सकहरुले लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिन थालेका हुन त तपाई के भन्नुहुन्छ ?
वर्तमान अवस्थामा अस्पतालहरुको जे जस्तो व्यवस्थापनहरु छ, बिरामीहरुको संख्या दिनानु दिन जसरी बढिराखेको छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्न चुनौतिपूर्ण छ । चिकित्सकहरुको हिसाबले हेर्ने हो भने लकडाउन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
उपचारको पद्दती पनि कमजोर भयो र खोपहरु पनि सबैलाई लगाउन नसकिएको अवस्थामा समस्या जटिलता तिर गएर भयाभह स्थिति बन्यो नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
गरीबमुलुक भएकाले यसको परिणाम हामीहरुले भोग्दै गइराखेका छौं । खासगरी मेडिकल फ्रन्ट लाइनमा भएका व्यक्तिहरुलाई मात्र खोप लगाउने प्रयास गरेका थियौं । अझै धेरै जनताहरुले पाउनु भएको छैन । मलाई असाध्यै दुःख लागेको छ । तपाईको यस नयाँ विकल्प साप्ताहिक मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने अब हामी आवश्यक मात्रामा खोप आपूर्तिको लागि कुटनीतिक तवरबाट जानुपर्छ ।
सत्तामा बस्नु भएका नेताहरुले पनि तेरो मेरो नभनिकन भारत सरकारसँग सम्बन्ध राम्रो बनाएर कुटनीतिक हिसाबले खोप ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यो खोप लगाएपछि कोरोना संक्रमण पनि हुँदैन, माक्स पनि लगाउनु पर्दैन सामाजिक दुरी पनि कायम राख्नु पर्दैन । जतापनि जान सकिन्छ भन्ने सोंच राखेका छौं भने यो एकदमै गलत हो ।
कतिपय खोप लगाएका मानिसहरुलाई पनि कोरोना संक्रमण भइराखेको छ । खोप भनेको एउटा प्रोटेक्सन गर्ने पार्ट मात्रै हो । यसको लागि चाही हाम्रो व्यवहारनै परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेको हाम्रो नेपाली समाजमा व्यवहार परिवर्तन गर्नमा नै ठूलो चुनौति छ ।
हामीहरुले जहिले पनि सम्झाउँछौं तर केही दिनपछि बिर्सने बानीले गर्दा सामाजिक दुरी वा अन्य भिडभाडलाई बिर्सन सकेका छैनौं । त्यसले गर्दा अलि समस्या बढेको छ । यि सबै चिजहरुमा हामीले व्यवहार परिवर्तन गरेर जानुपर्छ ।
तपाईले व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा नेताहरले सभा सम्मेलनमा सम्बोधन गर्न छोड्नु भएको छैन, भिडभाड नियन्त्रण भएको छैन नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
यस्तो बेलामा उहाँहरुले संयम भएर यस्तो बेला भिडभाड गर्ने बेला होइन । जनताहरुलाई सहजिकरण गरेर लैजानुपर्छ । खोपको कुरा हुन्छ, अक्सिजनको कुरा हुन्छ । अस्पतालहरुको क्षमता बढाउनुपर्ने छ । यस्तो बेलामा उहाँहरुले भाषण गर्नुपर्ने हो ।
सत्ताको लागि तेरो मेरो भनेर झगडा गर्ने बेला होइन । त्यसकारण कृपया अब १ देखि ३ हप्ताको लागि तपाईहरुले यसको लागि पहल गरिदिनुस्, त्यसपछि जब संक्रमणको दर कम हुँदै जान्छ । तपाईहरुले जे गर्नुछ आफ्नो सत्ताको लागि लड्नुहोला भन्न चाहन्छु ।
दुई हप्ताको लागि नेपाली जनताहरुलाई बचाउनको लागि गरीब जनताहरुलाई बचाउनको लागि जुन अहिले हरेक दिन मानिसहरु सास फेर्न नसकेर तड्पिरहेका छन् । कमसेकम ति मानिसहरुलाई कसरी हुन्छ उहाँहरुको जीवन गुणस्तरीय बनाउनको लागि पहल गरौं भन्न चाहन्छु ।
नाकाहरुमा किन आवाज जावत भइरहेको छ ? हामीले यसको रोकथाम गर्न किन सकिरहेका छैनौं ?
त्यही भएर मैले अगाडि पनि भनिसके की दुई तीन हप्ताको लागि मात्रै लकडाउन गरियो भने पनि केही हदसम्म त कन्ट्रोल हुन्छ नी हैन र ? बाहिरबाट आउने मान्छेहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरौं ।
व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ अझै पनि हामीसँग समय छ । अहिले पनि हामीले बुझिसकेको कुरा के हो भन्दा याु मुभमेन्ट गर्नको लागि गृह प्रशासनले गरिरहेको छ । स्वास्थ्यले गर्दै छ भनेर अरु हामीहरु चुप बसेका छौं । यस्ते बेलामा उहाँहरुलाई के व्यवस्था ? के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर अन्य निकायले पनि हेर्दिनुपर्छ । यो एउटा व्यक्ति अथवा संस्थाको मात्रै काम होइन ।
सबैजना मिलेर सहयोग गर्ने हो भने पो राम्रो हुन्छ । मैले लकडाउन बाहेक अर्को विकल्प देख्दिन । धनगढी, नेपालगञ्ज, विरगञ्जको अवस्था त्यस्तै छ । काठमाडौंमा पनि भयाभह हुन सक्ने स्थिति आउँदैन छ । जसरी संक्रमितको संख्या बढ्दै गइराखेको छ, फरक प्रकारबाट बिरामीहरु देखा परेका छन् । भारतको दिल्लीमा त्यस्तो हालत छ ।
एउटै बेडमा तिनचार जना बिरामी राखेर व्यवस्थापन भइराखेको छ । सडकमा राखेर चौरमा बसेर उपचार भइराखेको छ । त्यस्तो प्रकारको परिणाम हामीले भोग्न नपरोस्, देख्न नपरोस् भनेर लकडाउन बाहेक मैले अरु कुनै विकल्प देख्दिन ।
डरलाग्दो रुप नेपालगञ्जमा देखिएको छ, किन पूर्व तयारी गर्न सकिरहेको छैन सरकार पूर्वतयारी किन गरीएन ?
पूर्व तयारी भन्दा पनि यो भन्दा पहिला पनि हामीले दक्षिणबाट समस्या भोगेर आइराखेको हो । अनियन्त्रित भिडभाड जहाँ खुल्ला सिमाना हुन्छ, त्यहाँ सय जनालाई मात्रै कन्ट्रोल गरेर हुँदैन, सकिन्न ।
हजारौं किलोमिटरकोबिचमा मान्छेलाई कन्ट्रोल गरेर राख्न सकिदैन । हरेक नागरिकले यस्तो बेलामा मैले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । मान्छेहरु टेष्ट गर्न पनि मान्दैनन् ।
मान्छेहरु भागिरहेका छन्, ति भाग्ने मान्छेहरुले के महसुश गर्नुप¥यो भने म संक्रमित छु म घर गए भने पनि उमेर पुगेका बुबा–आमालाई सार्न सक्छु, मेरो परिवारको सदस्यहरुलाई सार्न सक्छु, केही भयो भने मेरो परिवारमा कसैको ज्यान जान सक्छ भन्ने कुरा उहाँहरुले बुझ्नुप¥यो । मुभमेन्ट रेष्ट्रिक्सन गर्नको लागि धेरै चिजहरु गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुको मात्रै दायित्व होइन । हरेक नागरिकले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारी लिनुप¥यो । नाकामा गाह्रो भइराखेको छ भने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले मात्रै गर्ने होइन । नागरिक समाजका हरेक व्यक्तिले गएर यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ म के गर्न सक्छु भनेर एउटा स्वयंमसेवा विकास हुन जरुरी छ ।
२०७८ बैशाख १३, १३: १४: ३०